युएस बंगालको विमान दुर्घटनासंगै धेरैका अनेकौं सपनाको अन्त्य « News24 : Premium News Channel
युएस बंगालको विमान दुर्घटनासंगै धेरैका अनेकौं सपनाको अन्त्य
युएस बंगालको विमान दुर्घटनासंगै धेरैका अनेकौं सपनाको अन्त्य, न्यूरो सर्जन डाक्टर बालकृष्ण थापाको निधनसंगै उनीबाट उपचार गराउने आशमा बसेका विरामीहरु बने निराश
चितवन, यूए वंगलाको विमान दुर्घटनासँगै धेरैका अनेकौं सपना अन्त्य भयो । तिमध्ये एक हुन् कवि हृदयका चिकित्सक बालकृष्ण थापा । न्यूरो सर्जरीसम्बन्धी सम्मेलनमा सहभागी हुन बंगलादेश गएका थापाले कहिल्यै नफर्किने गरी विमानस्थलमै प्राणान्त्य गरे सोमबार । जसको ब्यग्र प्रतीक्षामा थिए चितवनका विरामी ।
वंगलादेशबाट फर्किएर अपरेशन गरौला भन्दै डा. थापाले गत मंगलबार चितवन छोडेका थिए । र, झण्डै ६ दिन भरतपुरको एलाईभ अस्पतालको १ सय १२ नम्वर शैयामा रहेका पर्वतका यि ६५ बर्षीय पिताम्वर सापकोटा उनै न्यूरो सर्जन थापाको प्रतिक्षामा थिए ६ दिनदेखि । थापा बंगलादेशबाट त फर्किए । तर, चितवन पुग्न सकेनन् । सोमबार काठमाडौंमै पापी कालले टपक्कै टिप्यो ।
वीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर अस्पतालमा पनि तीन जना विरामी थापाको प्रतिक्षामा थिए । दैनिक तीन वटासम्म शल्यक्रिया गर्ने थापाले २०५८ सालमा क्यान्सर अस्पतालबाट चितवनमा सेवा दिन थालेका थिए । तर, भरतपुरका अन्य निजी अस्पताल पनि डा. आश र भरोसामा रहन्थे । जीवन अन्त्यसँगै क्यान्सर अस्पतालमा थापाको प्रतिक्षारत विरामीलाई के गर्ने भन्ने अन्योल छ । सात बर्षयता निजी क्षेत्रको एलाइभ अस्पतालमा शल्यक्रिया गरिरहेका थापाकै लागि अस्पतालले ६० लाख रुपैयांँ खर्चिएर नयाँ उपकरण भित्र्याएको थियो । थापालाई सहकर्मी टाउकाको ट्युमर शल्यक्रिया गर्ने देशकै एक नम्बर चिकित्सकका रुपमा स्मरण गर्छन् ।
२०२४ साल माघ ४ गते काभ्रेको कुशादेवी–३ मा जन्मिएका थापा २०५१ सालको एमबीबीएस व्याचका ‘सर्वोत्कृष्ठ’ थिए । बंगलादेशको ढाकास्थित बंगबन्धु शेखमुजीव विश्वविद्यालयबाट न्यूरो सर्जरीमा एमएस गर्दा थापा ‘गोल्ड मेडलिस्ट’ थिए । चिकित्सा क्षेत्र बाहेक थापाको अर्को पहिचान थियो–साहित्य । उनको दुई कविता कृति र एउटा निबन्ध संग्रह प्रकाशित छ ।